Puntland oo argagixisada ka qabsatey ceel muhiim u ahaa: SAWIRO - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Puntland oo argagixisada ka qabsatey ceel muhiim u ahaa: SAWIRO
Puntland ayaa guul ka gaartey dagaal ay argagixisada kula gashay buurta Habar humbulo ee deegaanka Calmadow ee gobolka Bari. Argagixisada Daacish iyo Shabaab ayaa ku dhuunta buuraha gobolka Bari ayagoo taageero ka hela Sucuudiga.
Sarkaal sare oo ka tirsan cutubyada la-dagaallanka argagixisada ee ciidamad Puntland ayaa saxaafada u sheegay in malayshiyaadka argagixisada laga saaray saldhig weyn oo ay ku lahaayeen buurta Habar-humbulo.
Agagixuisada ayaa goobta ka carartey ayagoon samayn wax iska caabin ah. Degaanka argagixisada laga saaray ee buurta Habar-humbulo ayaa waxaa ku yaalla ceelka”Ceel unkud” oo il-biyood muhiima u ahaa malayshiyaadka ka dagaallama buuraleeyda Calmadow, maadaama kooxdu ay go’doon ka yihiin dhinaca laamiga xiga.
Inkastoo Puntland ciidamo badan gaysay aaga Tukaraq hadana waxay fursad u heshay in a argagixisada ka saarto buurtan muhiimka kana qabsato ceel muhiim u ahaa.